၂၀၁၆ အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်း ၃၀ Androidsis
30 ၏ထိပ်တန်း Android ဗီဒီယိုဂိမ်း 2016
ဒီနှစ် ကဗီဒီယိုဂိမ်းများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည် အကောင်းဆုံးကိုစာရင်းပြုစုရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းကိုလျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဂိမ်းအမျိုးအစားများအားလုံးနှင့်အမျိုးမျိုးသောအရည်အသွေးများ၏အဆိုပြုချက်များနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်ပါပြီ။ အများပြည်သူ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာများကိုမချန်မထားဘဲဖွဲ့စည်းရန်ကြိုးစားရန်ခက်ခဲသည်၊ ထို့ကြောင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသိုင်းအဝိုင်းများ၌စုစည်းထားသူအားလုံးကိုစုဆောင်းရန်ကြိုးစားသည်။
La အကောင်းဆုံး Android ဗွီဒီယိုဂိမ်း ၃၀ စာရင်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်၎င်းသည်မပြည့်စုံသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲအခြားသူများကိုရွေးချယ်ရခြင်းကြောင့်လမ်းပေါ်တွင်ဆက်လက်ရှိနေခြင်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်၎င်းသည် ၈၀ ထက်ကျော်လွန်သောပိုမိုပြည့်စုံသောနောက်ဆုံး၏နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနှစ် 2016 အဆုံးသတ်မယ့်ဒီစာရင်းကိုပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကို ၂၀၁၆ မတိုင်ခင်မှာပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုယူဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုမပျော်နိုင်တော့ပါဘူး။
1 Deux ထွ GO
2 Banner စစ်ကိုင်း 2
5 တောင်တက် 2
12 Alto´ စွန့်စားမှု
14 Sky Force ကိုပြန်ဖွင့်သည်
15 Royale ထိပ်တိုက်တွေ့
16 Samorost 3
18 အာကာသ Marshalls 2
21 Batt အဆိုပါ Telltale စီးရီး
23 Skyfish ၏ဒဏ္.ာရီပုံပြင်
24 Donve ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအိတ်ဆောင် Edition ကို
26 Brim ၏ဓါးသွား
28 F1 2016
30 ပုတ်သင်ညို Run ကို
Deux ထွ GO
La Android မှာ GO စီးရီး ကစားတွေအများကြီးပေးခြင်းနှင့်ဖြစ်ပါတယ် Deux Ex Go သည်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖြစ်သည် Play Store တွင်သုံးခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုက်ဘာအင်အားအရှိဆုံးစစ်သည်တော်အတွက်ပဟေberိများနှင့်ကုန်းမြင့်ရုပ်ပုံများ။
Deus ထွ GO
ရေးသားသူ: Square ENIX, LTD
Banner စစ်ကိုင်း 2
Un အထူးဂိမ်း သူဘာဝတ်ထားလဲ ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် RPG မိုဘိုင်းအတွက်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးမှာ။ အကယ်၍ သင်သည်ယူရိုငွေကိုထုတ်ယူရန်အတွက်ဂိမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၊ ဤသည်မှာသင်ပထမဆုံးကြည့်သင့်သည်။
ဘုရင်များကမင်းကိုမင်းလိုခံစားရစေလိမ့်မယ်သို့သော်ထိုအရာသည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းသင်သိရှိလာပါလိမ့်မည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်မလွယ်ကူ။ အနှေးနှင့်အမြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာနေရာသည်သင့်ကိုသင်္ချိုင်းသို့ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။
စျေးနှုန်း: € 3,19
una ယခုနှစ်၏နောက်ဆုံးရောက်မှု၏ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါတို့ရှေ့မှာထားတယ် Zelda ပုံစံ RPG ၎င်း၏ဂရပ်ဖစ်ထူးချွန်မှုနှင့်ကာတွန်းကားများကိုသင်အံ့ can နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲများ ပြိုင်ကားများအတွက်အွန်လိုင်း multiplayer ဤအားလပ်ရက်များ၌သင့်ကိုချိတ်ဆက်ရန်သင့်အားလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးမည့်ကားအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး။ အထူးဂိမ်း သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ piques သည်။
မင်းကြည့်နေတယ် ပွင့်လင်းကမ္ဘာကြီး RPG သူတို့စူးစမ်းအဖြစ်ကစားသမားမှကျပန်းဖွင့်လှစ်, Crashlands ကတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများ။ သင့်တွင်လက်မှုပစ္စည်းများအတွက်ပစ္စည်းများစွာရှိသည်။
Crashlands - ARPG ပုံပြင်နှင့်မောင်းနှင်ခြင်း
una စွန့်စားမှု Simulator ၏ကြင်နာ ၎င်းသည်ဝေဖန်သူများ၏လက်ခုပ်သံများကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးခိုးကူးခွေဒေါင်းလုပ်များ၏မှတ်တမ်းအားလုံးကိုရရှိခဲ့သည်။ အဘို့ဖြစ်၏အဖြစ်လက်ဝှေ့လောက Rocky Balboa ကိုသတိရပါ.
El ဆူနာမီ Pokemon GO ပြန်နွေရာသီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိတ်ဆိတ်ကမ်းခြေထိမှန် တိုးပွားအဖြစ်မှန်မှအရှုံးမပေး။ ဖြစ်နိုင်သည်ယခုနှစ်အကောင်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခု။
Ketchapp Games သည်လက်သည်းခြေသည်းနှင့်ခေါင်းကိုမည်သို့ထိမိသည်ကိုသိသည် နှင့်အတူသင်ကစားရမည့်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခု လုပ်ကွက် stacking သွားပါ အမြင့်ဆုံးမျှော်စင်များကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေရန်။
Arcade တစ်ခုလုံး သင်သည်သိခြင်း၌ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံပေးမည် ငါးမန်းလိုဖြစ်နေတယ် အလွန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့်သမုဒ္ဒရာ၏အကျယ်နှင့်အရှည်အတွက်လုယူရာဥစ္စာရှာဖွေနေ။
အ Mekorama ပဟေlesိ သူတို့ကတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးမင်းတို့ကိုမင်းတို့ရေတွက်မယ်ဆိုရင် သင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုဖန်တီးပါ သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုအကောင်းဆုံးစိန်ခေါ်ရန်
Noodlecake စတူဒီယိုများဖြစ်လာသည် အရည်အသွေးအရှိဆုံးဂိမ်းများကိုလွှတ်တင်တဲ့စတူဒီယို Play Store သို့သွားသည်။ Alto´ စွန့်စားမှု သင့်ကိုလှပသောတောင်ကုန်းများနှင့်လှပသောနေဝင်ချိန်များမှတဆင့်သင်နှင်းလျှောစီးခွင့်ပေးသောအံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တစ် ဦး ရှိခဲ့ကြောင်းဂိမ်းရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်ဆိုပါက အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရာဝတ္ထုရူပဗေဒ ကျွန်တော်တို့ကိုအခက်ခဲဆုံးအဆင့်တွေမရောက်မှီတိုင်အောင်အသုံးပြုဖို့၊ Tigerball နှင့်ငါတို့အပြည့်အဝစေလိမ့်မယ်.
Sky Force ကိုပြန်ဖွင့်သည်
အားလုံးအမြင်အာရုံနှစ်သက်သောကြောင့်ထည့်လေ့မရှိ Sky Force ကိုပြန်ဖွင့်သည် သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ။ က အစစ်အမှန်သူများအတွက် 'em up' ရိုက် မတူညီသောပေါက်ကွဲမှုများနှင့်ကောင်းမွန်သောအမြင်အာရုံအရည်အသွေးမြေပုံများနှင့်အတူ။
အကောင်းဆုံး PvP ဂိမ်း ယခုအချိန်တွင်၏ကစားသမားများနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အကြား တော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံး နှစ်ရဲ့အစမှာအကောင်းဆုံးစူပါellellရဲ့လက်ကနေရောက်လာတာပါ။
De Machinarium နှင့် Botanicula ဖန်တီးသူများဖြစ်သည် အခြားသူ၏အနုပညာလက်ရာများ, Samorost 3။ သင်သည်၎င်း၏ကြီးမားသောဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးနှင့်သင်၏မျက်မှောက်၌ဖွင့်လှစ်သောအိပ်မက်မက်ကဲ့သို့သောစွန့်စားမှုအားဖြင့်သင်စွဲလမ်းလိမ့်မည်။
ရေးသားသူ: Amanita ဒီဇိုင်း
Rockstar Games ဟာဒီပွဲကိုကျင်းပချင်ခဲ့တယ် ထွက်ခွာ၏ဒသမနှစ်ပတ်လည်နေ့ ဒီဂိမ်း၏ Android ကိုယူလာဖို့။ အကယ်၍ သင်သည်အတန်းထဲတွင်လူမိုက်အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်လိုနေလျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
အနိုင်ကျင့်: နှစ်ပတ်လည် Edition ကို
အာကာသ Marshalls 2
ဂရပ်ဖစ်ကအကောင်းဆုံးပါပဲ Android ကိုအခုကြည့်လို့ရပါတယ် ယင်း isometric အမြင်နှင့်နောက်ယောင် သင်၏ရန်သူများထံမှတိတ်တဆိတ်သည်၎င်း၏အကြီးမြတ်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။
အာကာသ Marshal 2
una pinballs အဘို့အ screw နှစ်ခု၏အလှည့် Pinout နှင့်အတူ ဒါကဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်မပျက်စေဘူး။ Blade Runner တေးသံနှင့်၎င်း၏နီယွန်သည်မူလဂိမ်းမှလွဲပြီးသင်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။
အခြား 2016 ၏နောက်ဆုံးပေါ်ရောက်ရှိမှု၏ ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးပဟေintoိတစ်ခုထဲကိုအပြည့်အ ၀ ရောက်သွားတယ် မျက်စိနှင့်တွေ့ဆုံထက်အများကြီးပိုရှိပါတယ် အစပိုင်းတွင်
အချိုးကျ: စုံလင်ခြင်းသို့ Path
Batt အဆိုပါ Telltale စီးရီး
TellTale Games ကကျွန်တော်တို့ကိုပြတယ် နောက်တဖန် အဆိုပါ batman ဇာတ်ကောင်များ၏မှောင်မိုက် ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောဆုံးဖြတ်ချက်တွေချအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ပုံပြင်မှတဆင့်။ သင်စိတ်ကူးနိုင်သည်ထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ချက်။
Batman - The Telltale စီးရီး
Fruit Ninja ကိုဖန်တီးတဲ့ Halfbrick စတူဒီယိုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယူလာကြတယ် ဖန်တီးအကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းတစ်ခု နှစ်ပေါင်းမိုဘိုင်းသည်။ အများကြီး အကြောင်းအရာ, အထူးတိုက်ခိုက်ရေးနှင့်များစွာသောပလက်ဖောင်း သင့်ကိုစောင့်နေတယ်။
နောက်ထပ်အမြင်အာရုံမွေ့လျော် ကျန်ပြိုင်ဘက်များအတွက်အလွန်ခက်ခဲကြောင်း Crescent မွန်းဂိမ်းများကိုလက်မှ။ က မှော်ဇာတ်လမ်း မင်းရဲ့ရှေ့မှောက်မှာထားခဲ့တဲ့မင်းရဲ့ဇတ်ကောင်နဲ့မင်းသူ့ကိုတွေ့နိုင်တယ်။
စျေးနှုန်း: € 3,99
Donve ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအိတ်ဆောင် Edition ကို
Un ပွင့်လင်းကမ္ဘာရှင်သန်မှု အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်နည်းနည်း spooky ယခုနှစ်အကောင်းဆုံး entries တွေကို၏ iOS ကိုဖြတ်ပြီး Steam ကနေရောက်လာတယ်။ ရိုးရိုးလေး
တစ် ဦး ကိုလက်လွတ်မပေးနိုင်ပါ ဒီစာရင်းမှာဘောလုံးဂိမ်းနှင့် ဖီဖာမိုဘိုင်း ၎င်းသည်ကန့်သတ်ချက်များရှိသောဗီဒီယိုဂိမ်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုအကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဘောလုံး၏အနှစ်သာရကိုသင်၏စမတ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်သို့သယ်ဆောင်ပေးသည်။
ငါတို့မြေအောက်ရူပ Surfers ၏ဖန်တီးသူမှ Brim ၏ဓါးသွား, un လုံ့လရှိသူအဆုံးမဲ့အပြေးသမား ဇာတ်ကောင်အမြောက်အများနှင့်အတူအရောင်အမျိုးမျိုးနှင့်ဤအမျိုးအစားကိုကောင်းမွန်စေသည်။
ရေးသားသူ: SYBO ဂိမ်းများ
ဖမ်း တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အရည်အသွေးကိုဖြုန်းကြောင်းပလက်ဖောင်း နှစ်ဖက်စလုံးမှကြည့်လျှင် Nintendo ဂိမ်းများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအရင်းအမြစ်မှသောက်သည်။ အဆင့်အားလုံးတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးပေါင်းစည်းခြင်းကြောင့်၎င်းကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
El ဖော်မြူလာ 1 ၏အမျက်ဒေါသ Codemasters မှသင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်။ ဟုတ်တယ်၊ အဆိုပါ pc ဂိမ်း ၎င်းကိုသင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်တွေ့ရသည်၊ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိသော်လည်း၎င်းတွင်ဆားကစ်များ၊ မြင်းစီးသူရဲများနှင့်ချန်ပီယံ၏စိတ်ဓာတ်ရှိသည်။
ရေးသားသူ: Codemasters Software ကုမ္ပဏီလီမိတက်
စျေးနှုန်း: € 2,29
Un ထိတ်လန့်ဂိမ်း ဒါကမင်းကိုဖြတ်သန်းသွားမှာပါ အလွန်အထူးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် မင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ဇာတ်ကောင်တွေပါနေတဲ့အတွက်မင်းကိုဖမ်းနိုင်မယ့်လေထုနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွေကိုသုံးမှာပါ။
DISTRAINT: Pocket Pixel ထိတ်လန့်
ရေးသားသူ: Jesse makkonen
ပုတ်သင်ညို Run ကို
Un အဆုံးမဲ့အပြေးသမားပလက်ဖောင်း ကျနော်တို့မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမြင်ကြပြီအကောင်းဆုံး။ ယင်း ကြီးစွာသောမြန်နှုန်းနှင့်အထူးရှုထောင့် အဲဒါကိုသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းထဲမှာမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာထည့်ထားရမယ်။
စျေးနှုန်း: € 2,19
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » 30 ၏ထိပ်တန်း Android ဗီဒီယိုဂိမ်း 2016
အခုကျွန်တော်မိုဘိုင်းဂိမ်းဘုရင်က Clash Royale လို့ထင်တယ်၊ ဒါကိုဒေါင်းလုပ်မလုပ်တဲ့သူတိုင်းကိုတကယ်ကောင်းလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကမင်းကို link တစ်ခုချန်ထားတာပါ။ http://descargarclashroyale.org
Retro City Rampage DX သည်သင့်အား၎င်း၏ကမ္ဘာကြီးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ် retro နှင့် 80s များအထိ nods ဖြင့်စိန်ခေါ်သည်
သင်၏ Android အဟောင်းကို Apple iPod Classic အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပါ